ठेकेदारहरुको लापरवाहीले सरकारी काममै चरम ढिलासुस्ती !::Online News Portal from State No. 4
ठेकेदारहरुको लापरवाहीले सरकारी काममै चरम ढिलासुस्ती !
बागलुङ, २९ जेठ– ठेकेदारहरुको लापरबाहीले जिल्लाका सरकारी काम नै रोकिएका छन् । समयमा काम नसकेपछि अत्यावस्यक सेवामा पनि सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ । यस्तो समस्याको उदाहरण धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बनेको छ । अस्पतालमा निर्माणाधिन दुईवटा भवन अलपत्र परेपछि बिरामीले राम्रो उपचार पाउन सकेका छैनन् । आएका बिरामी राख्ने ठाउँ अभाव छ भने अस्पतालका अन्य उपकरण जडान र विभागहरु राख्न नसकिएको हो । २०६७ सालदेखि निर्माणाधिन भवनमध्ये एउटा मात्र बनेको छ । तीनवटामा राख्नुपर्ने संरचना र उपकरण एउटै भवनमा राख्दा सास्ती भोग्नु परेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रामजीप्रसाद सुवेदीले बताए । काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरेर केही शुरु भएको बताए ।
तर सोचेजस्तो नभएको उनको टिप्पणी छ । तोकिए अनुसारको काम गरेको भए तीन बर्ष अघिनै अस्पतालको भवन बनिसक्थ्यो । ठेकेदारले बिभिन्न बहाना बनाएर काम अलपत्र पारेका थिए । लामो समय सम्पर्कमै नआएको र आएपछि एकदुइ दिनमै छोडेर जाँदा करोडौं रुपैयाँको अस्पताल भवन अलपत्र भएको हो । अस्पतालको ए, बि र सि ब्लकको काममध्ये बी र सीको काम नबनेपछि ओपिडी, अपरेशन, ईमरजेन्सी, सामाजिक सुरक्षा शाखा, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, प्रसुती लगायतका सबै सेवा एउटै भवनबाट गर्नु परेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । भवन डिभिजन कार्यालयले भवन बनाउने जिम्मा ‘मिलेनियम विल्डर्स’ निर्माण सेवालाई दिएको थियो । अस्पताल परिसरमा बिजुलीको तार परेकोले हटाईदिन भन्दा ढिलाई हुँदा काम पनि ढिला भएको ठेकेदार कम्पनीको भनाई छ । देशव्यापी रुपमा ठेकेदारको लापरबाहीबारे टिप्पणी शुरु भएपछि अस्पतालमा काम थालिएको छ । ठेकेदारले आगामी बर्षसम्म काम सक्ने बताएका छन् ।
भवन डिभिजन कार्यालयका ईन्जिनियरले तेजेन्द्र पौडेलले भने ठेकेदारको बेवास्ताले ढीलाई गरेको टिप्पणी गरे । यो गुनासो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसम्म पनि पुगेपछि तत्काल काम नसके कारवाही चलाउने चेतावनी दिएका थिए । भवन अलपत्र पर्दा अस्पतालको विशेषज्ञ सेवाहरु पूर्ण रुपमा प्रभावित भएका छन् । डायलाएसिस्, ल्याब, प्रशासन, डाक्टरहरुको आवास लगायतका धेरै काममा असर परेको हो । ‘भवन नबनेकोले आएका उपकरण जडान जडान गर्न पाइएको छैन’ राजभण्डारीले भने, ‘दिन्छौं भनेको सेवा पनि दिन सकिएन ।’ धेरै बिरामी, आफन्त र सरोकारवालाले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको उनले गुनासो गरे । ठेकेदारको लापरबाहीले यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन समेत चार बर्षदेखि अलपत्र छ । यो दबाबपछि त्यहाँको ठेकेदारले पनि काम थालेको छ । भवन अभावमा सिडिओ कार्यालयको सेवा रेडक्रस सोसाईटी बागलुङ शाखाको भवनमा भाडामा संचालन गर्नुपरेको छ । २०७० साल फागुनमा दुइ बर्षभित्र काम सक्ने गरी जिम्मा लिएको जय बाबा गोरख संयुक्त निर्माण कम्पनी लामो समय सम्पर्कबाट हराएको थियो । देशव्यापी दबाबले उक्त कम्पनीले पनि काम देखाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
प्रजिअ बेदप्रसाद खरेलले ठेकेदारको तीन पुस्ते मैले चिनेको भन्दै काम नगरे कारवाही गरेर देखाउने चेतावनी दिएपछि कामले गति पाउन लागेको हो । ‘२०७२ फागुन ११ गते म्याद सकिएर थप गरेपछि ठेकेदार बागलुङ आएका थिएनन् । तीन करोड ८० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिने यो भवनका लागि हालसम्म १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भैसकेको छ ।